FARQIGA CUCUMBER: FAA'IIDOOYINKA IYO XEERARKA KOBCINTA NOOCYADA KALA DUWAN - CUCUMBER
Ugu Weyn Ee Cucumber
Tiknoolojiyada Qaybinta Qajaarinta
Qajaaradu waxay noqdeen mid ka mid ah khudradda ugu muhiimsan ee ku jirta cuntada maalinlaha ah ee muwaadiniinteena. Iyaga oo ay la socdaan barandhada iyo yaanyada, waxay ku koraan beerta khudradda cagaaran. Maqaalka ayaa ka wada hadli doona Finger, sharaxaadda qajaarka noocyo kala duwan, sifooyinka daryeelka xanaanada iyo beeritaanka.
Noocyadaas waxaa lagu xakumay V. A. Shefatov, oo ah aabe Ruush ah, oo ku yaal Saldhiga Volgograd VNIIR. Kala duwanaanshuhu wuxuu iska leeyahay bisilada hore iyo shinni-pollinating.
Warshadani waxay leedahay difaac sare oo sarreeya iyo caabbinta barafowga, iyo miraha - faraca badan, taas oo u oggolaanaysa in loo isticmaalo labadaba qaab caano ah iyo walxo cayriin ah oo loogu talagalay pickles kala duwan iyo diyaar garowyada.
Ma taqaanaa? Celceliska qajaarku waa 95% biyaha.
Cucumber Palm wuxuu u fiican yahay inuu sii kobciyo beerta furan ee cimiladeena. Xilliga khudradda wuxuu bilaabmaa gudaha 40-45 maalmood ka dib marka lagu bedelo meeshii koritaanka joogtada ah. Zelentsy - qaabka, silsilada qaab, dhererku wuxuu gaaraa 11 cm, dusha sare leeyahay qaab dhismeed naadir ah oo aad u la taaban karo, jidhku waa casiir leh, uu leeyahay caraf cad iyo qadhaadh, aad u cufan. Celceliska miisaanka qajaarka waxay ku yimaadaan 120 g.
Baaritaanka macluumaadka ku saabsan qajaarka kala duwan Palchik, waxaan ku soo gabagabeyn karnaa in ay ka fogaanayaan dhammaan faa'iidooyinka marka ay leeyihiin faa'iidooyin badan. Tababarka ayaa muujinaya in tani run tahay. Waa kuwan liiska kooban ee faa'iidadooda ugu weyn:
waxay leedahay dhadhan fiican iyo muuqaal muuqaal leh;
u fiican gaadiidka;
xilliga dhalidda waa ilaa 60 maalmood;
ugxan-yaraha qajaarka ayaa lagu sameeyay qaab ah xidhmo;
waxay leeyihiin dhul aad u ballaaran oo gobol-goboleed;
muuji iska caabida cudurada fangas kala duwan;
waxay u dulqaadataa dhaxan guga iyo dhaxan xilliga dayrta;
wadarta wadarta la socoshada tiknoolojiga beeraha ayaa gaari kara 7 kg mitir labajibbaaran.
Ma taqaanaa? Homeland ee qajaarka waxaa loo tixgeliyaa lugta Himilooyinka, halkaas oo mararka qaarkood ay ku soo wada baxaan qaabkoodii hore ee duurjoogta ah.
Palchik qajaar ah, oo leh daraasad taxaddar leh oo ku saabsan sharaxaadda kala duwan, waxay u muuqataa mid aad u awood badan marka la koray.
Waa in la xusuustaa in aysan suuragal ahayn in la soo saaro qajaarka ku yaala isla goobo dhowr ah oo isku xiga, sababtoo ah dhacdooyinka loo yaqaan "daal digaag", marka lagu daro, waa in la xusuusto in qeybo ka mid ah dhirta hore ee cudurka qaba ay ku sii jiri karaan ciidda qajaarka.
Goobta dhulku waa in si wanaagsan loo ilaaliyo saamaynta dabaysha, maadaama dhirtaasi ay tahay mid shinni-beey ah, dabayshu maaha kaliya in ay sumoobaan dhammaan manka oo loo baahan yahay inay soo jiidaan shinnida, laakiin sidoo kale waxay ka hortagaan inay si habboon u shaqeeyaan shaqadooda.
Cucumber ma loo saari karaa dhirta iftiinka-jecel, iyo sida laga soo xigtay cilmi-baarista qaarkood oo lagu sameeyey xaaladaha aqalka dhirta, koritaanka xooggan ee qajaarka ayaa dhacaya mugdiga. Sidaa daraadeed, waxaa lagula talinayaa inay ku beerato meelaha mugdiga ah ama sida habka qorraxda qorraxdu u dhacdo inta lagu jiro muddada korodhka firfircoonaanta.
Habka ugu fiican ee qajaar ah biyo ku filan iyo carrada hawada lagu rujin karo. Waxaa lagula talinayaa in ka hor beerashada qajaarka, ciidda waa in ay waqti ku qaadato "faaruq" iyo la jilciso xeryahooda dabiiciga ah iyo walxaha macdanta ay u baahan tahay.
Xaqiiqda si fiican loo yaqaan waa jacaylka qajaarka ee qoyaanka sare, laakiin beeritaanka meesha ku urursan biyaha dhulka ayaa laga yaabaa inay la qabsadaan kalluunka xidid ama horumarinta cudurada fangas. Muraayadaha iftiinka ama dhoobo boodh ah oo ku yaalla meel u dhow mawjadaha biyaha ayaa ugu haboon.
Xeerarka soo degaya Finger
Qaar ka mid ah noocyada qajaarka ee guud ahaan waxaa lagu beeray sida inta kale, oo aan caan ka aheyn saaxiibbadiis. Si kastaba ha ahaatee, qajaar Palchik marka la beeray oo ku koray aqalka dhirta lagu koriyo ayaa leh qaabab ay tahay in la sheego.
Qodashada tooska ah
Habkani wuxuu ku lugleeyaa abuurka isla markiiba dhulka hoostiisa, isagoo aan lahayn biqilka hore ee sprouts. Waa suurtagal in la bilaabo bartamaha bisha Maajo, marka celceliska heerkulka maalinlaha ee ka sareeya 15 ° C.
Ka hor inta geedi socodka degdeg ah ee beerto ciidda waa in la nadiifiyaa haramaha, loosen iyo bacrimiya leh digada cusub.
Waa muhiim! Seeds sidoo kale waxay ubaahan tahay diyaar garowga diyaarinta. Waxaa lagama maarmaan ah in ay ku duubaan faashad biyo qandac ah oo ku rid weel. Si looga hortago uumiga qoyaanka, waxa weelka lagu dabooli karaa dabool. Ka dib dhowr maalmood ee xaaladaha noocaas ah, miraha la beeray karo.
Ka dib markii formation of godad leh qoto dheer oo ah 2-4 cm iyo waraabinta badan oo, waxaad beeri kartaa abuur ah. Next, ceelasha ku saydhaa lakabka khafiifka ah ee ciidda iyo sugto muuqaalka caleemaha ugu horeeya, taas oo xaaladaha wanaagsan ee laga yaabo inay muuqdaan todobaad ka dib.
Habkani wuxuu ku haboon yahay qajaarka sii kordhaya ee xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo, maadaama loo isticmaali karo sanadka oo dhan. Wixii isaga u, waxaa haboon ku beeridda miraha grooves yar oo qalin qalin leh ciidda bacrin ah, daboolay lakabka khafiifka ah ee carrada ka kor.
Marka xigta, ku shub miraha biyaha oo ku dabool muraayad ama caag. Ka dib muuqaalka 3-4 caleemo dhab ah, waxaad ka dhigan kartaa weel gaar ah.
Iyadoo bilawga guga, geedo waxaa loo samayn karaa dhowr saacadood ee hawada u furan ujeedada adag tahay. Dhirta yaryar waxaa lagu beddeli karaa dhulka u furan bartamaha bisha May, marka sariiraha loo diiriyo heerkulka ku filan.
Nidaamkan waxaa lagu dardar-gelin karaa iyada oo la aasayo qashinka kala duwan ee organic iyo balka sariiraha.
Daryeelidda noocyada kala duwan ee Palchik, sababtoo ah sifooyinka nafleyda, waxay noqon karaan kuwo adag oo ka mid ah dhibaatooyinka, kuwaas oo laga wada hadli doono dheeraad ah.
Kala duwan tani waxay leedahay koritaan aad u sarreeya, markaa markaad sii kordheyso waxaa lagula talinayaa inaad isticmaasho trellis toosan. Maadaama qajaarku u dhaqmayo dabeecaddiisa la mid ah liana, wuxuu kor u kici doonaa kor u kaca, kaas oo si weyn u fududeynaya buufintaada iyo goosashada miraha mustaqbalka.
Aad bay u fiicantahay in ay kaa caawiso helitaanka goosashada miisaanka leh waxay noqon kartaa dhismaha lagu koriyo, taas oo la dhisi karo iyadoo la dhejin karo xargaha oo dhan aagga koritaanka qajaar iyo fidinta wax kasta oo aan kuusneyn daboolida.
Dhirta qajaarka ah waa mid la yaab leh "qaniinyada biyaha", si kastaba ha ahaatee, inkastoo ay ujeeddadoodu tahay, waxay ku habboon tahay in la xusuusto in carrada qoyan ay sababi karto cudurada fangas badan. Sida habboon, waa inaad maalin kasta qajaarka ku qortaa, ugu yaraan hal baaldi ah oo ah dareere kasta oo baadiyaha ah.
Waa muhiim! Haddii aadan haysan fursad aad ku cabto qajaarkaaga maalin kasta, isku day inaad sameyso nidaam waraabka waraabinta, taas oo ka heshay codsiyo aad u ballaaran oo ka jira aaggeenna.
Maalmaha khaas ah ee kulul, sidoo kale waxa fiican in lagu buufiyo waraaqo leh dhibcood biyo, taas oo ka badbaadin doonta dayrta bilaha ah waxayna sii dheereeyaan muddada dhaxanta. Waraabinta waxaa si fiican loogu sameeyaa biyaha heerkulka gudaha ee fiidkii ama subixii hore.
Xilliga oo dhan, qajaarka fasalka waxay u baahan yihiin inay sameeyaan dhowr waxyaalood oo dheeraad ah. Tusaale ahaan, muddada ubaxyada ballaaran, waa suurad wacan in la bacrimiyo qajaarka leh gargaar ka mid ah Bacriminta fosfate kasta.
Xaaladda xilli ciyaareedka firfircoon, Bacriminta ay ku jiraan nitrogen iyo potassium waa in la isticmaalo, iyo haddii ay dhacdo qalqal kulul, quudinta foliar waa in la adeegsadaa oo ay ku jiraan potassium, fosfooraska iyo birta, taas oo loogu talagalay in lagu xasiliyo dheelitirka qulqulka jirka dhirta.
Iyadoo dhalidda liidata iyo liidashada liidata, Bacriminta bacriminta ku salaysan ee organic waa in la doorbido, tusaale ahaan, la badhxay 1:10 mullein dareeraha ama shimbiraha iyo marmar lagu daray HOL iyo humus.
Ilaalinta ugu horeysa ee ka dhanka ah cudurrada badankood ee qajaarka waa inay ka hortagaan dulqaadashada ciidda biyo. Tani waxay ka hortagtaa dhacdooyinka nooc kasta oo loo yaqaan fungal loo yaqaan. Ujeedooyinka loo yaqaan prophylactic, marka lagu daro wakiilada kiimikada kala duwan, sidoo kale waa walxo aan khatar ahayn, sida fuska ka soo dushooda baradho iyo decoction ee dushooda yaanyada. Qalabkani waxay si fiican u caawinayaan in laga takhaluso tuubada, aphids iyo siisay.
Sidaa darteed, waxaan rajeyneynaa in markaan akhrino maqaalkan, waxaad ku timid fikrad aad u culus oo ku saabsan haddii aad bilaabi lahayd inaad ku kobciso noocyada kala duwan ee qajaar qajaarka goobtaada.
Waraabinta ku habboon iyo ciriiri ka dib tilmaamidda markaad beerto waa waxa kaliya ee aad u baahan tahay si aad u hesho goosashada weyn.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Cucumber 2019